‘जब मैले पढ्न र पत्रकारिता गर्न खोजेँ त्यसपछि चरित्रहिनको नाम पाएँ ’ « नारी खबर >
हाम्रो समाजमा बस्ने विभिन्न विचार र धारणा अनि मान्यता राख्ने मानिसहरूबीच एउटाको कुरासँग अर्कोको कुरा मिल्दैन । अर्कोको विचारसँग एउटाको विचार मिल्दैन । सबै मानिस एकै प्रकृतिको भए पनि त समस्या त हुन्थ्यो होला नी । नत्र कसैले कसैमाथि प्रश्न गर्ने कुरा नै हुँदैनथ्याे । कसैले कसैको कमजोरी अनि बल को कुरा पनि गर्दैनथे होला ।
संसारका हरेक ठाउँका मानिस हरेक जात, धारणा, मान्यता, धर्म, संस्कारका छन् । सोही संस्कार अनि मान्यतामा अघि बढेका छन् । कतिपय भने आधुनिकतातर्फ पनि आकर्षित छन् । केही भने पहिले कै कुरा, पहिलेकै बानी व्यहोरा दोहोर्‍याइरहेका छन् । म एउटा सामान्य परिवारमा जन्मिएकी केटी । हरेक कुरा परिवारका सदस्यको सल्लाह, सुझावका साथ हुर्कंदै आएकी थिएँ।
मेरा बुबाआमाले अनि आफन्तले मेरो लागी नराम्रो कहिल्यै सोच्दैन झै लाग्थ्यो । गाउँकै विद्यालयमा कक्षा ८ सम्म अध्ययन गरेर बेँसीसहरमा कक्षा ९ मा पढ्न आएँ । पढाई चल्दै गयो । एसएलसीको नतिजा पनि राम्रै आयो । मैले के पढ्दा ठिक हुन्छ, कहाँ जाँदा ठिक हुन्छ भनेर सल्लाह दिने कोही पनि भएन । राम्रो विषय पढाउन परिवारको अवस्था पनि थिएन ।
साथीभाइसँग सल्लाहमा बेँसीसहरमै व्यवस्थापन विषय लिएर अध्ययन गरेँ । कक्षा १२ मा पढ्दै गर्दा मेरो बिहेको कुरा चल्यो । यति छिट्टै बिहे गर्छु भन्ने सोचेको थिएन । तर, भने जस्तो कहाँ हुने रहेछ र । विवाहपछि पनि पढाउने, कुनै रोकतोक नगर्ने भन्ने कुरा आएपछि परिवार, आफन्तको जोडले बिहे गरे ।
तर, मलाई थाहा थिएन, जब मेरो बिहे भयो, तब मेरा आँशुमा डुब्ने दिन सुरु हुन्छ भनेर । यतिबेलासम्म मैले बेंसीसहरको एउटा रेडियोमा रिर्पोटरको रुपमा काम गरिसकेको थिएँ । बिहे भएको एक बर्षमा सासुको निधन भयो । घर सम्हाल्ने जिम्मा मेरो टाउकोमा थुपारियो । मलाई भने पढाई र पत्रकारिता छोड्न कत्ति मन लागेन । बाध्यतामा घरमा गएर बसेँ । कामकाज गरे ।
तर, मन मानेन हरेक दिन मेरा आँखाबाट आँशु बग्थ्यो । हरेक दिन ममा निराशा छाउँथ्यो । किन बिहे गरेँ मैले भनेर । बिहेबिहे गरेर ठूलो भूल भएको अनुभूति भयो । मेरा अफिसका दाइदिदीले दैनिक जसो फोन गरेर अब जागिरलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, पढ्नुपर्छ भनेर सम्झाउनुहुन्थ्यो ।
तर, मेरो घरका सदस्य भने मैले अब घर नै धान्नुपर्छ । बुहारी भएपछि घर सम्हाल्ने हो । कमाई गर्ने होइन भनेर भनिरहन्थे । कहाँसम्म भने, जुन केटीले बिहे गरेर घर सम्हालेर बस्छ, छिट्टै बच्चा जन्माउँछ, ठूला घाँसका भारी, दाउराका भारी, दैनिक खेतबारीमा काम गर्छ उसैको प्रशंसा गरेको मेरो कानले सुनेको थिएँ । बजार बस्ने होइन भनेर पटकपटक भनिरहेका हुन्थे । मलाई पटक्कै यो कुरा मन परेन । मैरै मनजफ्तीले सदरमुकाम फर्किए र काम सुरु गरे । पढाईलाई निरन्तरता दिएँ ।
जब म जाँगिरमा फर्किएको थिएँ, तब मेरो श्रीमान विदेश गइसकेका थिए । जति नजिक हुँदा माया थियो, त्यती टाढा भएपछि विस्तारै कम हुँदै गयो । म एउटा केटी मान्छे, त्यसैमाथि पत्रकारितामा लागेको । हरेक व्यक्तिसंग भेटघाट, चिनजान, कुराकानी भनेको दैनिकी नै हो । जति धेरैसंग सम्पर्क, सहकार्य गर्न सके उत्तिकै काम गर्न सहज हुने पेशा ।
तर, कसले बुझ्ने मेरो काम ? काममा लागेपछि भनेको समयमा घर जान सकिन । श्रीमानको फोन आएको बेलामा उठाउन सकिन । अनि मलाई नकरात्मक रुपमा हेर्न थाले परिवारले । त्यसैमाथि मेरो काम देखेर डाहा गर्नेहरु परिवारमा नचाहिँदो कुरा लगाउन पछि हटेन । मलाई मन परेको अनि मैले छानेको काम गर्दा अरुलाई मन नपर्ने रहेछ । हुन त, सबै म जस्तो हुन्छ भन्ने पनि छै नि !
हरेक दिन जसो श्रीमानले तँ यस्तो, त उस्ताे रे । यस्तो गर्दै हिँड्छरे भन्ने शब्द फेसबुकको म्यासेन्जरमा आउँथ्यो । मैले बुझ्न खोजेँ के कुरा हो ? कसले भनेको ? मैले के गरेँ भनेर । तर, कहिल्यै उत्तर आएन । मात्र तँ यस्तो र उस्तो । राम्रोसंग कुरा गर्न चाँहदा पनि कुरा गर्न खोजेनन् । पटकपटक मलाई चरित्रहिनको संज्ञा दिने । म धेरैसँग बोल्ने, हिँड्ने भएर होला सायद उनलाई मन नपरेको । बिहे अघि त्यो काम मन पराउनेले समय ढल्किँदै जाँदा मन पराउन छाडे । मलाई बुझ्न छाडे । मेरो विश्वास गर्न छाडे ।
अनि बल्ल बुझ्दै गएँ, सायद म गाउँमा बसेको भए, घर सम्हालेर, घाँस दाउरा, मेलापात गरेर, बालबच्चा खेलाएर बसेको भए म एउटा असल बुहारी हुने थिएँ । पढ्न खोजेँ । जागिर खान खोजेँ । त्यही भएर मैले चरित्रहिनको संज्ञा पाएँ । यस्ता शब्दले कति पटक मेरो मन छिया–छिया भयो भनेर मलाई थाहा छ । तर, पनि बाँच्ने र अरुको सामु केहि गरेरै देखाउँछु भन्ने लागेर बसेको छु । आफुलाई सन्तुष्टी मिल्ने र मन पर्ने काम गर्दा त्यो केटी चरित्रहिन हुन्छ भनेर कहाँ लेखेको छ होला भनेर मेरो मनमा उब्जिरहन्थ्यो ।
जब एउटा केटी मान्छे, आफ्नो इच्छा अनुसार प्रतिष्ठाकाे पेशा गर्छे र हिँड्छे भने त्यो नराम्रो केटी नै हुन्छे त ? याे मेराे समाजसँग सोध्न मन लागेको प्रश्न हाे । जब महिला आत्मर्भिर हुन चाहन्छे, नाम कमाउन चाहन्छे, धेरै जनासंग चिनजान गर्न चाहन्छे, भविष्यमा सफल हुन चाहन्छे, त्यो महिलालाई नराम्रो दृष्टिले किन हेरिन्छ हाम्रो समाजमा ? समाज मात्र नभएर अझ भनौं भने आफ्नै दाजुभाई, दिदीबहिनीले समेत राम्रो मान्दैनन् ।
विहान ६ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म कोठाबाट बाहिर भएपछि उसको बारेमा सोँच्ने र नराम्राे भन्नेहरु धेरै हुने रहेछन् । त्यसै मध्येको म एउटी हुँ । जब म विहानको समाचार बाचनका लागि जान्छु, तब खाना खाने केही समय छुट्याएर कोठा आउँछु र पुन: फर्किन्छु । काम भ्याएर कोठा फर्कदा ९ बजिसकेको हुन्छ ।
यसरी बाहिर धेरै बस्नेलाई नराम्रो सोच्नुभन्दा के काम गर्दो रहेछ ? कत्तिको दुःख रहेछ ? भनेर सोँचिदिने मान्छे भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । तर कोही भेटिन । आफन्तले त बुझेन, पराईको के कुरा गराैँ । जति पीडा र रोदन भएपनि म अघि बढिरहेको छु । पाइला रोक्न भने सकको छैन । परिवारले नै किन नराम्रो सोचोस् मेरो काममा सफलता पूर्वक अघि बढ्ने अठोट आएको छ मनमा ।
पीडापीडा भोग्दै आएर आजभोली कसैको कुरा नसुनी अघि बढ्न मन लाग्छ र बढेको पनि छु । तर, हौसला र प्रेरणा दिने भने आमा बुवा बाहेक कोही भेटिन । अनि पटकपटक आफैंलाई प्रश्न गर्न मन लाग्छ काममा हाैसला दिने साथ र सहयोग गर्ने भनेकाे केटासँग बिहे गरेर के पाएँ ? आफ्नै पौरखमा बाँच्न खोज्दा साथ पाउनुकाे साटाे पाएँ त केवल चरित्रहीनको नाम अनि घृणा । ए समाज ! ‘बुहारी भएपछि घाँस दाउरा बाहेक इज्जत प्रतिष्ठकाे काम नगर्ने ?’
नेपाली महिला पनि भोक, शोक सबै आत्मसात गरेर बस्नु परेको छ, अफगानी जस्तै
अहिले बिरामीको सेवामा खटौं, अन्यायको हिसाब पछि गरौंला